निमुखाहरुको चीत्कारमा बेखबर राजनीति
कोरोना माहामारीले आम नागरिकलाई दिनदिनै अत्यास बनाइराखेको छ । निमुखा जनताहरु अक्सिजन नपाएर, अस्पतालले भर्ना नलिएर र संक्रमणले छटपटिदै मर्न बाध्य भएका समाचारहरु सञ्चार माध्यममा छरपष्ट छन् । निमुखा जनताहरुको चित्कारले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरुमा भरिएका छन । राजनैतिक पहुँच हुनेहरु, बैंकमा ब्यालेन्स भएकाहरु त जसोतसो यो माहाव्याधिको सामना गरिरहेका होलान्, लाखौ खर्च गरेर भएपनि उपचारमा बल गरिरहेका होलान्, तर हुँदा खानेहरुको चाहीँ यो माहाव्याधिले विचल्ली नै बनाएको छ । हुन त पहिलो लहरको कोरोना संक्रमण एक वर्ष पहिला नै आएको थियो । पहिलो लहरको संक्रमणबाट सचेत भएर पनि सरकारले कुनै तयारी नगरेको कुरा अहिलेको अभावले पुष्टि गरेकै छ । यसमा राजनैतिक दलहरुले पनि सरकारलाई खबरदारी गर्ने मेसोमा कहिलै ध्यान दिएनन् । आ–आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक कलहमा रुमलिएर दलहरुको समय बितिराखेको घटनाहरु छिपेका छैनन् । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तिब्र हुँदै गएपछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर हुँदा खाने समुदायमा पर्न गएको छ । हुँदा खाने वर्गका संक्रमितलाई गाह्रो भएपनि अक्सिजन नपाउने, अक्सिजन जसोतसो महंगो शुल्क तिरेर उपलब्ध भइहाले पनि कोभिड अस्पतालमा नपाउने अवस्था बनेको छ ।
अहिले सत्तासिन दल आफुँभित्रकै रडाकोमा रुलमुलिएको छ । विपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) जनता समाजवादी पार्टीलगायत जनताको चित्कार सुन्ने फुर्सदमा छैनन् । भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लाहरुमा संक्रमण भयावह हुँदैछ । प्रदेश २ मा पर्ने धेरै जसो जिल्लाहरु संक्रमणले त्रासदीपूर्ण अवस्था बनाईरहेको छ । तर, मधेशी जनताको अधिकारका लागि राजनीति गरेको भन्ने जसपा सत्ताको खेलमै झुमिरहेको छ । जसपा जनताको समस्यामा भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने मुद्दामा विभाजित छ । मधेशी जनतालाई कोरोना संक्रमणले सखाप पार्न लागेको उनीहरुलाई पत्तो छैन् । मधेशमा संक्रमितको लागि उपचार व्यवस्था गर्न र कोभिड अस्पतालको संख्या तत्काल बढाउन, भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुको दिनहुँको भीडलाई व्यवस्थापन गर्न र अक्सिजनको अभावले संक्रमितहरुको मृत्यु हुन नदिनका लागि उनीहरुलाई चाँसो छैन् । अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको माहाव्याधि व्यवस्थापन गर्नु हो भन्ने कुरा जसपाले मनन् गर्न सकेकै छैन ।
नेपाली कांग्रेसको पनि चाला उहि छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस कहाँ सुतेको छ जनतालाई पत्तो छैन् । सरकारले गर्ने गलत निर्णयहरुको विरोधको सवालमा पनि दलभित्र खेमा नै छुटिइहाल्छ । ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि कांग्रेस सभापती मौन बसेका थिए भने अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल खेमाका केही नेताहरु ओलीको कदमलाई निरंकुशताको संज्ञा दिइरहेका थिए । तत्कालिन समय उनीहरु एक भएर ओली कदमविरुद्ध जुटेका थिएनन् । ओली सरकारले गरेका उल्टो कामहरुमा खबरदारी गर्नमा प्रमुख प्रतिपक्ष चुकिनै रह्यो । ओम्नी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्डलगायतका करोडौँका काण्ड त्यत्तिकै सेलाए । बिचौलियाको करोडौँ रकमको कमिसन बार्गेनिङ नमिलेको भएर नै कोरोनाविरुद्वको खोप आउन रोकिएको खबर सञ्चार जगतबाट नै बहिरियो । राम मन्दिर र भ्यू टावर बन्ने बजेट पर्दै गर्दा कोरोना उपचार अस्पताल बनाउने र लकडाउनले समस्यामा परेकालाई राहत दिने तर्फ कसैको ध्यान गएन । सत्तासिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र त झनै एक अर्कालाई सिध्याउने लडाउने खेलमा नै व्यस्त रहे । एकता गरेर बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) रहुन्जेल ओली र प्रचण्डको अहंमता सतहमा देखिएको थियो । उनीहरु एकले अर्कालाई कसरी सिध्याउने भनेर लामो समय दोहोरी नै खेले । जब अदालतले एमाले र माओवादी छुटयाइदियो । ओली आफ्नाहरुलाई नै मिलाउन नसकेर कारबाही गर्दै नेता तर्साउनमा व्यस्त रहे भने प्रचण्ड रहलपहललाई लिएर भत्केको माओवादीको घर ठडयाउनमा रुमलिए ।
अहिले ओली विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री पद जोगाउने दाउमा जसपालाई फुटाउने अभियानमा जुटेका छन् भने अन्य दलहरुको उनको खेलमा रुलमुलिएका छन् । कोरोना संक्रमणबाट अत्तालिएका जनताको भरोसा बन्न कुनै पनि राजनैतिक दलहरु तयार छैनन् । दलहरुको निकम्मापनले गर्दा आम नागारिकमा निकै निराशा बढिरहेको छ । सत्ता उन्मादमा रमाएको नेतृत्वले निमुखाहरुको पीडालाई नजिकबाट नियाल्न नसक्ने कुराको पुष्टि हुँदै गएको छ । चुनावमा करोडौँ खर्च गर्ने दलहरुले आफ्नै पहलमा अक्सिजनको व्यवस्था गर्न किन नसक्ने ? सत्ताका लागि सांसद किन्न सक्ने दलहरुले कोभिड उपचार अस्पताल तयार गर्न किन नसक्ने ? के सबै काम सरकारको मात्र हो र ? तिनै जनताको मतबाट सत्ताको कुर्सीमा पुगिन्छ भन्ने जानकार हुँदाहुदै तिनै जनताको उपचारका लागि तिनै जनतालाई माहाव्यधिबाट जोगाउनका लागि पार्टीले खर्च गर्न किन नहुने ? च्याखे थापेर एकअर्कालाई दोषी देखाएर आफू पन्छिने काममा दलहरु किन व्यस्त छन ? मुलुकमा संक्रमण महामारीले त्राहीमान बनाएको समयमा सत्ताको खेलमा अल्झिएर कसलाई ढाल्ने कसलाइै प्रधानमन्त्री बनाउने जस्ता काममा दलहरुको ध्यान जानु बेमौसमको बाजा नै भएको छ । नेपाली जनताहरुले एकएक हिसाब राखेर आगामी चुनावमा राम्रै जवाफ दिनुपर्ने कुरालाई भूल गरियो भने हामीले यस्तै नियति सधै भागिरहनु पर्ने पक्का नै छ । मुख्य दलहरु नै कोरोना संक्रमण रोक्ने सवालमा चुइक्क पनि नबोली सत्ता टिकाउन र भत्काउमा केन्द्रीत हुनु अहिलेको परिपेक्षमा दुभाग्र्य नै हो ।
अहिले जताततै बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । औषधी, अक्सिजन, आयुसियु, भेन्टीलेटर र भ्याक्सिनमसमेत कमिसनको खेल चलिरहेको छ । कमिसनले व्यापकता पाउँदा पनि कोही बोल्ने अवस्था छैन् । यस्तो समयमा समेत निहित स्वार्थमा लडिरहेका दल र नेताहरुलाई इतिहासले भने पक्कै माफी दिने छैन् । पंक्तिकार यो संकटको घडिमा सबै किचलो र स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय समस्यामा केन्द्रीत हुन आव्हान गर्दछ ।